Ukuziva Kwasekhaya Apt. (Sivulile ngoku) msg for booking
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAyrton
Ukuba ujonge indawo enokufikeleleka lula kwinkonzo ye-cab, ukuhanjiswa kokutya okanye i-tuk tuk ngaphandle kokubeka esichengeni ubunewunewu le iya kuba yindawo efanelekileyo kuwe. I-KANGLA FORT edumileyo kunye ne-KING'S PALACE ikumgama nje weekhilomitha ukusuka kwindawo (10mins ukuhamba). Isikhululo seenqwelomoya sikuma-20mins nje ukuba kude ngeyure yezithuthi eziphakamileyo ukusuka kwindawo.
Yindlu entle enamagumbi amabini okulala omabini anendlu yangasese edityanisiweyo. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, isitovu, igesi kunye nekhitshi ware njl. Kukho i-terrace evulekileyo apho "iKangla Fort" inokubonwa khona imbono ethandekayo ngokuhlwa ngekomityi yeti / ikofu. Okokugqibela, siye sayila indawo yethu ngendlela yokuba ungaze uphoswe likhaya lakho.
Yenye yezona ndawo zipholileyo ngaphandle, onobuhlobo kakhulu kwaye zingakhuselekanga uya kuzifumana entliziyweni ye-Imphal. Le ndawo ineendawo ezininzi zokutya ezitalatweni kwaye ukuba ungumntu othanda ukutya othanda ukuzama ukutya okutsha, uya kuthandana nale ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ayrton
Zive ukhululekile ukusoloko uqhagamshelana ngayo nayiphi na imibuzo ngefowuni okanye ngomyalezo. Sikwinkonzo yakho kwaye sikunika amava amnandi yeyona njongo yethu iphambili.